July | 2019 | bishnunmdc
देवीको वास खयर भारानी ताल
Posted on July 5, 2019 by bishnunmdc
धन्यवाद सहित साभारः जनमत साहित्कि मासिक २०७६ जेठ, अंक २६०
हिमाल, हिमताल, ताल, हिमनदी, नदी खोलाहरुले सजाईएको सुन्दर देश हो नेपाल । हाम्रो देशमा रहेका सबै नदी, हिमाल, तालतलैया प्राकृतिक रुपमा सुन्दर र लोभलाग्दा त छन् नै त्यसमाथि सबैले भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवँ सांस्कृतिक महत्व बोकेका हुन्छन् । समुद्र सतहदेखि तीन हजार मिटरभन्दा माथि रहेका तालतलैयाको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्ता तालहरु नेपालमा हजारौँ छन् । केहि तालको बाहेक प्राकृतिक सुन्दरता, ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय महत्वबारे चर्चा नगरिएको मात्र होइन कि तिनको विवरणसम्म पनि संकलन गरिएको छैन । विश्वका बीसभन्दा बढि देशका पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र, रक्षावन्धनका दिन विशेष मेला लाग्ने, देवीको वास भएको, चाडपर्व र संस्कृति बोकेको त्यस्तै ताल हो खयर भारानी ।
नयाँ संबैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारले कसैको भर नपरी, आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका त्यस्ता महत्वपूर्ण ताल र स्थानको खोज गरेर सूचीकरण गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । त्यसोगर्दा त्यस्ता सम्पदाको राष्ट्रिय तहमा सूचीकृत भई मुलप्रवाहमा जोडन सकिन्छ । नेपालमा ३ हजार मिटरभन्दा माथि थुप्रै विश्व चर्चित, आर्कषक, जीवजन्तु र वनस्पतिवारे अध्ययन गर्न मिल्ने सयौँ तालहरु छन् । सोलुखुम्बुमा रहेका इम्जात्से, गोक्यो र दूध कुण्ड, दोलखाको च्छोरोल्पा, सिन्धुपाल्चोकको भैरव कुण्ड र पाँच पोखरी, रसुवाको गोसाइकुण्ढ, लमजुङको दूधकुण्ड, मनाङको तिलिचो र गंगापुर्ण, मुस्ताङको दामोदर कुण्ड, म्याग्दीको खयर भारानी ताल, डोल्पाको से–फोक्सुण्डो, मुगुको राराताल लगायत हजारौँ सानाठूला हिमताल छन् । त्यसबाहेक तीन हजार मिटरभन्दा तल पोखराको फेवा ताल र त्यस्तै महत्वराख्ने, त्यत्तिकै सुन्दर हजारौं ताल, कुण्ड र पोखरी छन् । तिनीहरुको विवरण छैन । प्रचार भए तापनि ती चाडपर्वमा सिमित छन् ।
यसै सन्दर्भमा मैले यहाँ प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको म्याग्दी जिल्लाको उत्तरमा खोप्रा भन्ने स्थानमा रहेको खयर भारानी तालको बारेमा केहि जानकारी दिने प्रयासमा छु । सुन्दर खयर भारानी हिमताल अन्नपूर्ण दक्षिणको पश्चिम काखमा अवस्थित छ । तालको पूर्वी किनारमा खयरभारानी देवीको सानो मन्दिर छ । समुद्र सतहदेखि ४ हजार ६ सय मिटरको उचाईमा रहेको यो तालमा हिउँदको समयमा चार–पाँच इन्चसम्म आइस जमेको हुन्छ । प्रायः हिउँदको समय ताल आइसमा परिणत हुन्छ । २०७४ पुस ७ गते कपनका साथीहरुसँग त्यहाँ पुग्दा तालको पूर्वतर्फको ७० प्रतिशत भागमा करिव एक इन्च बाक्लो आईस जमेको थियो भने पश्चिम खण्डमा अत्यन्त गाढा नीलो निर्मल पानी सूर्योदयको किरणसँगै झलझल भएर चम्केको थियो ।
ताल, चारैतिरबाट अग्ला हिमाल, काला चट्टान, हिमनदीले बगाएर थुपारेका गेगर र ढुङ्गा (मोराइन)ले घेरिएको छ । तालको पूर्वमा अन्नपूर्ण दक्षिणको पश्चिमभाग, पश्चिममा फाङ र नीलगिरि हिमाल, उत्तरमा अन्नपूर्ण प्रथमको दक्षिणभाग र दक्षिणमा कलीगण्डकीको गल्छी र धवलागिरि हिमालको हिमशृङखला रहेको छ । खयर डाँडाको शृङखला चारैतिर ढुङ्गा र पहाडले घेरिएको हुनाले सो मनमोहक ताल हिउँदमा आइसमा परिणत हुँदा ठूलो गोलाकार बटुकोमा सेतो घिउँ टमक्क जमे जस्तै देखिन्छ । तालबाट पूर्वतर्फ रहेको अन्नपूर्ण दक्षिणको ठाडो पश्चिमी पाखो, उत्तरतर्फ अन्नपूर्ण प्रथमको दक्षिणी चुचुरो र फाङ हिमालका चुच्चो परेका तीखा धार मात्र देखिन्छन् । दक्षिणमा भगवान विष्णुरुपमा समेत लिइने गरेकोे कलात्मक विशाल कालो शीलाले ताललाई आडदिएको छ ।
खोप्राबाट करिव पाँच घण्टा हिमाली पहाड चढे पछि पापीहरु चढन नसक्ने भनी लेखिएको बिसौनीमा पुगिन्छ । स्थानीय तीर्थयात्रीले त्यसलाई धर्म र पाप छुट्याउने उकालो भनी नामाकरण गरेका छन् । त्यहाँसम्म पुग्दा मानिस विछट्टै थाकेका हुन्छन् । कतिलाई हिमाली उचाईले बिरामी नै बनाउछ । त्यहाँबाट पनि कति मानिस फर्कन बाध्य हुन्छन् । त्यस पछि भने पन्द्र मिनटमा एउटा सानो पहाड चढे पछि तालमा पुगिन्छ । त्यो उकालो चढेर तालमा पुग्नेलाई धर्मात्मा भन्ने गर्छन् । यो तीर्थयात्रीको विश्वास हो ।
मुटुको ढुकढुकी ढकढक पार्दै मेहनतसाथ उकालो चढेर तालको किनारमा पुग्दा यसको सौन्दर्यबाट मोहित भएर मानिस हर्षले उन्मत्त हुन पुग्छन् । यात्रु क्षणभर आफ्ना सम्पूर्ण पीडा भुलेर रोमाञ्चित हुदै तालको सुन्दरतामा वशीभूत हुन बाध्य हुन्छन् । धार्मिक विश्वास अनुसार त्यहाँ पुगे पछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ । पुराणमा लेखिएको देवताबस्ने ठाउँमध्येको एक हो भन्ने विश्वास हुन्छ । वरपर ऋषि र देवगण दामोदर कुण्ड र मुक्तिक्षेत्रमा बसेझैँ बसेका हुन्छन् ।
सुन्दरता भनेको त्यस्तो वस्तु हो जस्ले मानिसलाई मात्र होईन प्रकृतिलाई पनि त्यत्तिकै लोभ्याउछ । अन्नपूर्ण प्रथम जस्तो चर्चित र अन्नपूर्ण दक्षिणजस्ता मनमोहक हिमाल पनि त्यो तालको सुन्दरताबाट मन्त्रमुग्ध भएर हेरिरहेका हुन्छन भने हामी मानव त के हौ र ? तालको काखमा पुग्नासाथ हाम्रा दुःख, कष्ट, भोक, प्यास, थकाई सबै एकाएक कुलेलम ठोके । मेरो पनि मन, ह्दय र पैताला हवामा उढन थाले । म रोमाञ्ति हुदै त्यसको पूर्ण स्वाद लिन ताल वरपर नाच्न थालेँ । मेरा मित्र मिठाराम अधिकारी र ज्ञानेन्द्र बानिया खुशीले मनमत्त भएर तालको तल र माथि गरेका थिए । “होशियार” भन्दै हिमाली क्षेत्रमा खुशीले आल्हादित हुँदा दूर्घटना भएका कुरा सम्झाएँ । प्रकृतिले नेपाल र नेपालीलाई दिएको त्यो स्वर्गको टुक्राले हामीलाई मात्र होईन हरेक वर्ष प्रकृति प्रेमी हजारौं विदेशी पर्यटक र भारानी देवीका भक्तलाई रोमाञ्चित पारेको छ ।
स्वर्ग सजिलै प्राप्त हुदैन । कोरिया, जापान र चीनले आफ्नो देशलाई धेरै कष्ट एवँ मेहनत गरेर, इमान्दार र जिम्मेदार भएर स्वर्ग बनाएका हुन् । नेपाललाई प्रकृतिले हजारौँ स्वर्गका टुक्रा दिएकी छन् । दुर्भाग्यवश हामीले तिनलाई चिन्न सकेका छैनौँ । त्यसैले हामी स्वर्गका टुहुरा सन्तान भयौँ । स्वर्गमा पुग्न र आनन्द लिन कठोर मेहनतनै गर्नु पर्छ । हामीले त्यस्तै गरेका थियौँ । त्यसैले त स्वर्गका टुक्रा मध्येको एक टुक्रा खयर भारानी तालको किनारमा हामी उभिएका थियौं । जहाँ वर्षाको बेला खोप्रादेखि तालसम्म थरीथरीका फूल फुलेर पखेरा ढकमक्क भएका हुन्छन् ।
ताल र मन्दिरको नाम खयर डाँडाको नामबाट राखिएको हो । मन्दिरको माथिल्लो धारबाट गोलाकारमा रहेको तालको पूर्णरुप देखिन्छ । वर्षाको समयमा पानीले ओगटने क्षेत्रलाई हेर्दा ताल करिव दश हजार वर्गफिट क्षेत्रमा फैलिएको छ । तालको पानीको गाढा नीलोपन देख्दा मैले नेपालको सबैभन्दा गहिरो से–फोक्सुण्डो ताललाई झल्यास्स सम्झेँ । खयर भारानी ताल गोसाईकुण्डभन्दा गहिरो र उचाइमा छ भने चौडाइमा सोभन्दा सानो छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी दुवै ताल उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । ताल र खयर भारानी देवी कालीगण्डकी उपत्यका, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड, नीलगिरि र धवलागिरि हिम शिखरको छिमेकी हुनुका साथै अन्नपूर्ण हिमशृङखलाको काखमा लुटुपुटु भइ बसेकाले यो क्षेत्रलाई मूल रुपमा भगवान विष्णुको क्षेत्र मानिन्छ भने गोसाइँकुण्डलाई भगवान शिवसँग जोडिएको छ ।
खयर भारानी ताल र खयर भारानी मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष जनै पूर्णिमाको दिन विशेष पूजा हुने गर्छ । पूजाको लागि काठमाण्डौँ, नवलपरासी, रुपन्देही, स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका तीर्थयात्री वर्षाको समयमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरी मनको इच्छा पुरा गर्न त्यहाँ पुग्छन् । वराह भगवान विष्णुको एक रुप हो भने वाराही सप्तमातृका मध्येकी एक हुुन् । खयरकी देवी भारानी, वाराही देवीको अंश भए तापनि ती देवी अविवाहित भएकाले उनलाई भारानी भन्ने गरेको स्थानीयको विश्वास छ । नेपालमा जनै पूर्णिमाको दिन मेला लाग्ने धेरै तीर्थस्थलमा बली दिइँदैन । तर यहाँ जनै पूर्णिमाको दिन भारानी देवीसँग गरेको भाकल पुरा भएको अवसर पारेर बोकाको बली दिने चलन छ । त्यस्तै चलन ढोरपाटनको उत्तरगंगामा पनि छ । यस्ता चाडपर्वले हजारौँ वर्ष पुरानो मानव सभ्यताको विकास क्रमको संस्कृतीलाई जीवन्त राख्दै आएका छन् ।
अन्य तीर्थस्थलमाझैँ यहाँ पनि भक्तजनले यो तालमा स्नान गरे पछि पापबाट मुक्ति पाईने, सन्तान हुने, मागेको कुरा पुरा हुने र अर्को जन्मको बाटो सुगम हुने कुरामा विश्वास गर्छन् । तलाउमा स्नान गरेपछि तीर्थयात्रीले त्यहाँका पुजारीसँग भारानी देवीबाट आफूले माग्न चाहेको कुरा माग्दछन् । त्यसपछि पुजारीले ‘भक्तजनले मागेको कुरा पुरा गरिदिनु’ भन्दै तालबाट हातमा आएको वालुवा र ससाना ढुङ्गा प्रसादको रुपमा भक्तालुलाई दिन्छन् । देवीसँग भाकल गर्दा मन्दिरमानै पुग्न पर्छ भन्ने छैन, तर आफ्नो भाकल भारानी देवीले पुरा गरिदिए पछि भने त्यहाँ बोको लिएर बली दिन जानै पर्छ, स्थानीयले त्यसलाई पुर्ण पालना गरेका छन् ।
आधुनिक जीवनमा ताल र देवीको दर्शन गर्दा तीन कुराको प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । पहिलो, शहर बजारको अस्तब्यस्त जीवनबाट एक सातानै किन नहोस प्रकृतीसँग साइनो गाँस्न पाईन्छ । तालमा पुग्नुभन्दा पहिलेनै घान्दु्रक, टाढापानी, दोबाटो एवं पदयात्रामार्गबाट उत्तर र उत्तरपूर्वतर्फ माछापुच्छे«, गंगापूर्ण, हिउँचुली, अन्नपूर्ण दक्षिण सहित अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको लामो ताँती पहाडमा जन्तीको लश्कर हिँडेझैँ नजिकै देख्न सकिन्छ । त्यसैगरि पश्चिम र पश्चिम दक्षिणमा नीलगिरि र धवलागिरि प्रथम सहित लामवद्ध लामो हिमशृंखलालाई नजिकबाट आँखा झिम्क्याएर जिस्क्याउन सकिन्छ । दक्षिणमा पर्वत, वाग्लुङदेखि रुकुमसम्मका पहाडहरु बयली खेल्दै तराईका फाँटसम्म पुगेको देखिन्छ ।
दोस्रो फाइदा भनेको लालीगुराँसको बाक्लो र हरियो बन, निगालो घारी, चराचुरुङ्गी, कस्तुरी, झारल, चौरी र याक, खेतिपाती, गुरुङ र मगरका सुन्दर गाउँ, संस्कृति, रहनसहन र स्थानीयसँग नजिक भएर तीनीसँग लुकामारी खेल्दै ह्दयमा सजाउन पाउनु हो ।
तोस्रो फाईदा भनेको अन्नपूर्ण दक्षिणको पश्चिमी काखमा पुगेर पवित्र खयर भारानी तालमा स्नान गरी कुमारी खयर भारानी देवीबाट आर्शिवाद र अगाध माया लिनु हो ।
खयर भारानी ताल पुग्न धेरै दिन र ठूलो तयारी चाहिदैन । काठमाडौँबाट हिडेको तीन–चार दिनमा पोखरा, घान्दु्रक, टाडापानी, दोवाटो हुदै खोप्रा डाँडा (३६६० मि.) पुग्न सकिन्छ । खोप्रा डाँडाबाट खयर भारानी ताल (४६०० मिटर)मा पुगेर स्नान र मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कन १० देखि १२ घण्टा लाग्छ र सो दिन फर्केर खोप्रामानै बास बस्नु पर्छ । तालमा जाने दिन बाटोमा होटल नभएकाले दिउँसोको खाना, पानी र बाक्लो लुगा बिर्सन हुदैन । बाटोमा हिउँदमा आइस र जनै पूर्णिमाको बेला वर्षामा हिलो हुने हुँदा होशियार हुन पर्छ । भीर र असजिलो ठाउँमा ढुङ्गाको सिँढी र फलामको बार हुनुकासाथै यात्रामा धवलागिरि र टुकुचे हिमालको लामो शृङखला, कालीगण्डकी उपत्यका देखि चुरे, सिवालिक र तराईसम्म देखिने भएकाले थकाई लागेको पत्तै हुदैन । फर्कने बेलामा खोप्राबाट घोडेपानी हुदै पोखरा पुग्न दुई–तीन दिन लाग्छ । त्यसबाहेक फुर्सद अनुसार सो यात्रालाई तातोपानी, मुक्तिक्षेत्र वा अन्नपूर्ण आधार शिविर तिर मोडन सकिन्छ । यो यात्रा मार्गमा लज, इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा उपलब्ध छ ।
ताल समुद्र सतहदेखि ४ हजार ६ सय मिटरको उचाइमा रहेको हुनाले त्यहाँ जान पदयात्राको अनुभव जरुरी छ । सामान्यतयाः त्यस्तो उचाइमा पुग्दा भोक र नीद नलाग्ने, टाउको दुख्ने, सासफेर्न गाह्रो हुने, रिङ्गटा, थकाइ र वाकवाकी लाग्ने हुन सक्छ । त्यसो हुनु भनेको लेक लाग्नु हो । त्यसबेला प्रसस्त पानी पिउने, झोलिलो खाना खाने, लामो–लामो सास तान्दै–फाल्दै बिस्तारै हिडनु पर्छ । त्यसोगर्दा पनि सुधार नभएमा उकालो नचढि कम उचाइमा झर्नु उत्तम उपचार हो ।
‘मेरो भाकल पुरा भयो । पैसा कमाउन विदेश गएको छोराको धेरै वर्षसम्म अत्तोपत्तो केहि भएन । एक वर्षा एक्लै खयर भारानी ताल पुगेँ । त्यहाँ डुबुल्की मारेर भारानी देवीसँग ‘छोरा फर्केर आवस म फेरि बली दिन आउने छु ।’ भनेर भाकल गरेँ । त्यसको दुई वर्ष पछि छोरा फर्केर आयो । म साह्रै खुशी भएँ । दोस्रो पटक त्यहाँ पुगेर आफ्नो इच्छा पुरा गरिदिएकोमा भारानी देवीको नाममा बोकाको बली दिए ।’ खयर भारानीबाट फर्कंदा दोस्रो दिन हामी चौपारीमा बसेर चील्ला काला ढुङ्गाले छाएको सुन्दर गाउँ लेस्पारलाई हेर्दै थियौँ । त्यसैबेला घाँसको भारी बोकेर आएका एक जना मानिस पनि भारी विसाएर हामीसँगै बसे । भलाकुसारीको क्रममा– ‘हामी खयर भारानी ताल पुगेर आउदै छौँ’ भनेर मैले जानकारी दिएँ । भेडाबाख्राको लागि हरियो डाले घाँस बोकेर घर फर्कंदै गरेका पर्वत लेस्पारका ९२ वर्षीय डिल बहादुर पुनले खुशी हुदै खयर भारानी देवी प्रति अगाध आस्था प्रकट गर्दै हामीलाई सो कुरा भनेका थिए । हाम्रो देश सुन्दर छ । त्यो सुन्दरता भित्र ससाना धेरै स्वर्गका टुक्रा छन् । त्यहाँ देवताको बास हुन्छ, धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । सुन्दरता भित्रको स्वर्गमा पुगेर देवात्मासँग प्रत्यक्ष मितेरी गास्न देश दर्शन भने गर्नै पर्छ । ॐ